राष्ट्रपतिले दिएको तक्मामा किन छैन चुच्चे नक्सा ? यस्तो छ खास रहस्य — Sanchar Kendra
१माधव नेपालले किन बोलाए बैठक ?
२ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्नै लाग्दा माधव नेपालले बोलाए आफूपक्षीय नेताहरुको बैठक
३ओली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि प्रचण्डले के भने ?
४कोरोना नियन्त्रणमा विश्वभर चर्चामा रहेकाे भुटानी मोडल
५जङ्गलमा यस्तो काण्ड मच्चाइरहेका बेला अचानक प्रहरी पुगेपछि भयो दोहोरो भि’डन्त
६विवाहको सात महिनापछि नेहा रोहनप्रितबीच हातपात, भाइरल बनेको भिडियोसहित
७ओलीलाई प्रचण्डले फोन गरेर भने- यो के तमासा गर्नुभएको ?
८चपली हाइटमा के भयो त्यस्तो सहमति ? जसकारण फेरी प्रधानमन्त्री बने ओली, खुल्यो यस्तो रहस्य
९प्रधानमन्त्री ओलीले आज शपथ लिने, महन्थ र नेपाल समूहलाई मन्त्रिपरिषदमा समेट्ने प्रयास
१०केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त, सपथ भोलि
११काठमाडौँ उपत्यकामा कर्फ्यु सुरु हुन नपाउँदै आयो अर्को कडा आदेश
१२ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित
काठमाडाैं । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६३३ जनालाई मानपदवी, अलंकार र पदक वितरण गरिन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राष्ट्रका लागि उल्लेख्य योगदान गर्ने व्यक्तिलाई उच्च मूल्यांकनका साथ हरेक साल विभूषण दिइने गरिएको छ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा विभूषण दिने व्यक्तिको नाम मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन हुने गरेको छ।
शुक्रबार वितरण गरिएको विभूषणमा नेपालको नक्सामा चुच्चो हराएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भयो। धेरैले लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सासहितको पदक नआएको गुनासो गरेका छन्।
तर, यो गत वर्ष २०७६ सालको संविधान दिवसको अवसरमा घोषित विभूषण थियो। जतिबेला नेपालको नक्सामा लिपुलेक, कालापानी समेटिएको चुच्चो जोडिइसकेको थिएन।
गृहको बेवसाइटमै यो गत वर्ष २०७६ सालको संविधान दिवसको अवसरमा घोषणा गरिएको विभूषण भनिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष नै यी विभूषण वितरण गर्न खोजिएको थियो। तर, कोरोना महामारीका कारण विभूषण प्रदान गर्न असम्भव भयो।
‘चुच्चो नजोडिइकनै छापिएको विभूषण थियो, अहिले चुच्चो देखिएन भनेर भनिए पनि त्योभन्दा अगाडि नै आइसकेको विभूषण हो,’ गृह प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने। १३ जुन २०२० मा संसदबाट संविधान संशोधन भई लिपुलेकसहितको नक्सा जारी भएको थियो।
अक्सिजन प्लान्ट सन्चालन गर्न बलिभद्र रानाको पहलमा गोर्खा ग्रुपद्वारा २ लाख ३७ हजार सहयोग